नेपाल आर्मी क्लब र नेपाल एपिएफ क्लब आज भिड्दै – Khel Dainik
नेपाल आर्मी क्लब र नेपाल एपिएफ क्लब आज भिड्दै
बारा (खेलदैनिक) । रुस्लान नवौं सिमरा गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो क्वाटरफाइनलमा आज नेपाल आर्मी क्लब र नेपाल एपिएफ क्लब सिमरा रङशालामा भिड्दै छन् ।
खेल ३ बजे शुरु हुनेछ ।
कुन टोलि सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ला? अनुमान गर्नुहोस् ।
← बिक्रम लामा गम्भिर घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएपछि कसले के भने ? थाहा पाउनुहोस् । बिक्रम लामाको शल्यक्रिया सफलताका साथ सम्पन्न →